क्यारेबियन प्रिमियर लिगः सन्दिप लामिछाने आज पहिलो खेल खेल्दै, यसरी हेर्नुहोस् लाइभ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
क्यारेबियन प्रिमियर लिगः सन्दिप लामिछाने आज पहिलो खेल खेल्दै, यसरी हेर्नुहोस् लाइभ
काठमाडौं । क्यारेबियन प्रिमियर लिग अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा आज नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको टिम मैदानमा उत्रिँदैछ । सन्दिपको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पेट्रिओट्स आज गुयाना अमेजन वारियर्ससँग भिड्दैछ । लिगको दोस्रो खेलमा सेन्ट किट्सको कप्तानी वेष्ट इण्डिजका अलराउण्डर क्रिस गेलले गर्नेछन् भने गुयाना अमेजनको कप्तानी पाकिस्तानी अलराउण्डर सोएब मलिकले गर्दैछन् ।
सन्दिपको पछिल्लो प्रदर्शन र उनको टिममा भएका खेलाडीहरु हेर्दा आजको खेलमा सन्दिपले खेल्न पाउने सम्भावना बलियो छ । खेल स्थानीय समयअनुसार आज राती हुने भएपनि नेपाली समयअनुसार भने भोलि बिहान पौने ४ बजे हुनेछ । भोलि बिहान पौने ४ बजे सुरु हुने खेल बिहान साढे ६ बजेतिर सकिनेछ । यो खेल नेपालमा स्टार स्पोर्टस २ र स्टार स्पोर्टस २ एचडीबाट लाइभ हेर्न सकिनेछ ।